संगीतमा जीवन खोज्ने प्रयासमा सरस्वती – ABC KHABAR
November 4, 2015 November 4, 2015 ABC Desk कला
कुनै बेला आफ्नो बोधो शरिरलाई स्लिम बनाउन शाररिक रुपमा तन्दुरस्तीकालागि नाच्न जाने सरस्वती संगीतमा लहसि एर एल्वम ‘उत्तर–पूर्व’ सम्म आइपुगेकी छन् । उनले आप्नो निरन्तरको नृत्य तथा गायनको साधनाले उत्तर–पूर्वको भिडियोमा मोडलिङ सम्म गर्न भ्याएकी छन् ।
उनी गायीकाको अलवा नृत्यङगाना तथा निर्देशक समेत बनेकी छन् । उत्तर– पूर्वका दुइवटा गीति भिडियोमा उनको म्युजिक भिडियो यतिखेर बजारमा आएको छ । कुनै व्यवसायीक निर्देशक तथा मोडल भन्दा कम नदेखिएकी उनी गायीकाको रुपमा पनि उतिकै जमेकी छन् । उनले कलाकारमा हुने सबै गुण आफैमा भएको संकेत यस गीतमार्फत दिएकी छन् ।
दशैँ घटस्थापनाको दिन तथा उनको आफ्नै जन्मदिनको अवसर पारेर उनले गीत म्यजिक भिडियो एल्बम ‘ उत्तर–पुर्व’ विमोचन गराएकी हुन् । आफुलाई संगीतले घिसारेर ल्याएको भन्दै गीती एल्बमको बारेमा बताएकी छन् । उनले भनिन् , ‘मलाई संगीतले तान्यो म यहाँ सम्म आँए’ । सुरूमा नाचेर कलाकार बन्ने सोख पालेकी उनले पछि गायनमा हाम फाल्न पुगिन । किन त ? उनले भनिन् , ‘ मलाई स्लिम शरिर मन पराउने मान्छे सानै उमेर देखि नाच्दै आएकीले काठमाडौंमा डान्स सेन्टरमा गइरहन्थेँ । एक दिन सेन्टरको अगाडी सा रे ग म प ध नी सा को आवाज सुनेँ, जिज्ञासा लाग्यो र सोधे के गरेको यो ? त्यहाँ संगीतको कक्षा चलिरहेको रहेछ बल्ल थाहा भो ।’ त्यसै बेला देखि नियमित संगीत सिक्न जान थालेको उनको भनाइ छ ।
हिमाली जिल्ला सोलुको गार्मामा जन्मेर ५ कक्षा सम्म त्यहीको शेकारसिँ माविमा पढेकी उनले ६ कक्षाका लागि भने काठमाडौं आइपुगेको बताइन् । काठमाडौंमा सर्वसाधरण पढ्ने विद्यालय श्रम स्कुल टुसालमा पढेकी उनले बाल्यकालमा विभिन्न स्थानमा नृत्य गर्न गएको सम्झँदै कलाकार बन्ने सपना देखेको बताइन् । ‘ मेरो सपना कलाकार बन्ने थियो तर गीत नै गाउँने कलाकार हुन्छु भन्ने चाँही लागेको थिएन् ।’ तर संगीत गुरु निरास मगरको संगत र प्रेरणाले गीत संगीतमा प्रवेश गरेको उनले गर्वका साथ सुनाइन् । बाहिरबाट गीत सुन्दा साह्रै आनन्द लाग्ने गरेपनि आफैले गीत गाएर बजार सम्म पु¥याउन भने निकै अप्ठयारो रहेको उनले आफ्नो अनुभव सुनाएकी छन् । उनले भनिन्, ‘ बाहिर सुन्दा गीत जती सजिलो हुन्छ तर वास्तवमा गीतलाई गीत बनाउन निकै मिहेनत गर्नुपर्ने रहेछ ।’
चारवटा गीतको संगालो रहेको ‘उत्तर–पुर्व’ गीति एल्बममा दुईवटा म्युजिक भिडियो समेत बनाइसकेकी उनले आफुलाई गायीका मात्र नभई मोडलको रुपमा समेत उभ्याएकी छन् । उनले आफ्नै शब्द, संगित र स्वरमा रहेको ‘उडि जाने हावाले र नभए हुन्छ सुन ’ बोलको गीतमा उत्कृष्ट मोडलिङ र भिडियो निर्देशन सम्म गरेकी छन् । एक्सन इन्टरटेनमेन्ट प्रालीले बजारमा ल्याएको उक्त एल्बममा अरु दुइवटा ‘उसको मनमा म र उडौँ उडौँ लाग्यो’ बोलको अडियो गीत रहेको छ ।
आफुलाई शास्त्रीय संगीतको विद्यार्थीको रुपमा लिने सरस्वतीले आफुले भने अहिले चलेको लोकपप रिमेक्सको स्टायल मनपर्ने गरेको बताएकी छन् । हारमोनियमलाई गुरुबाजाको रुपमा लिने उनले संगीतको बजारलाई भने कम आँकेकी छैनन् । बजार छ तर पु¥याउने कसरी उनको चिन्ता छ । उनले भनिन्, ‘ बजारमा पु¥याउन सके सफल हुने थिएँ ’। उनले आगामी योजना सुनाउँदै भविष्य संगीत तथा कला क्षेत्रमा नै विताउने रहर भएको बताएकी छन् । भावि दिनमा एउटा वृद्वाश्रम खोल्ने अनि वृद्व वद्वाहरुको स्याहार सम्भार गर्दै आफुले भने मिठा मिठा भजन गाउँदै बस्ने उनको अर्को सपना हो ।
बजारमा आएका प्रतिभाहरु मध्ये आफु पनि लाइनमा उभिन आइपुगेकी बताउने सरस्वतीले आफुले चाहे जस्तो म्युजिक भिडियो नबन्ने हो की लागेको भएपनि पछि हेर्दा सन्तोष जनक नै रहेको बताएकी छन् । उनको यो पहिलो मोडलिङ भने होइन रहेछ । उनले भनिन्, ‘मैले यो भन्दा अगाडी नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको टेलिसिरियल ‘पुरुष तिमि पु्रुष’ मा समेत अभिनय गरेकी थ्एिँ ।’
सानो भुमिका भएपनि ठुलो अनुभव त्यहीँबाट संगालेको बताउने उनको ध्येय अब साँच्चै कलकारितामा जमेर लाग्ने योजना रहेको छ ।
विहिबार निगमले निजी सवारीसाधनलाई तेल वितरण गर्दै , तेल पाउन कुपन अनिवार्य